Folo taona koa ity
2012-10-19 @ 11:17 in Serasera.org
Folo taona toa izao no nampidirina voalohany tamin'ny serveur ny namana.serasera.org. Ny 19/10/2002 izany no azo lazaina fa nahateraka ny namana.serasera.org, telo taona taorian'ny niforonan'ny serasera.org amin'ny ankapobeny. Mbola tsy nisy facebook tamin'izany fa tao no efa afaka nifandefa hafatra, nifampijery sary, nifampiditra namana... nifampiresaka mivantana. Izany hoe ny ankamaroan'ny zavatra natao tato amin'ny facebook taty aoriana ihany.
Ny tena antony nipoirany dia ny hampifandray be be kokoa ny Malagasy amin'ny alalan'ny internet. Ary anisan'ny zava-dehibe nilofosana ny hoe "teny malagasy ranoray". Tamin'ny 1999 raha niforona ny lisitra serasera.org izay fifandraisana amin'ny alalan'ny email, dia mbola tamin'ny email fotsiny no nifankahalalana. Tsy mbola afaka nahita mombamomba an'ilay olona hafa raha tsy hoe hanontany. Nony niverina tany Madagasikara aho dia nahita fa efa misy manana fifandraisana amin'ny internet ihany ny olona na dia mbola vitsy aza. Mbola vitsy dia vitsy tamin'izany ny cyber-café saingy efa nisy. Nitsiry ara ny hevitra niaraka tamin'ny namana iray fa hitarina amin'ny fifandraisana sy fihaonana ny serasera... nantsoina anjambany hoe "Site de rencontres" satria mbola tsy nisy ny voambolan'ny "Social Network" tamin'izany, dia natsangana ny namana.serasera.org.
"Betsaka" avy hatrany ny nazoto, ary mbola any avokoa ny ankamaroan'ireo namana voalohany, na dia efa samy lehibe aza. Nitalahoana mihitsy ny ankizy tamin'izany hampiditra sary. Nisy fotoana aza moa nanaovanay séance photo nandritra ny iray andro tao Ampefiloha. Nantsoina izay te hametraka sary nefa tsy manana fakan-tsary na tsy mahavita scanner any amin'ny cyber mba ho tonga halaina sary ao Ampefiloha... dia nisy vitsivitsy tonga tokoa :-)
Nisesisesy ny fihaonana rehefa avy eo. Voatahiry ao amin'ny forum sy ao amin'ny tahirintsary ny sasany... nahafinaritra hatrany. Fa nisy koa ny tsy nifankahazo, niady, nisaraka, ny nifamerina, ny tsy nifankafoy... ary na hatramin'izao aza dia mbola tsy mifankafoy. Ny sasany moa nahasahy nifampilaza anarana sy sary tao amin'ny facebook hatramin'izao, ny sasany nivady arahin-janaka, ny sasany tsy mifampiteny intsony, fa mbola misy koa ny mijanona ao amin'ny serasera, mamangy tsindraindray, miresaka tsindraindray, mamorona fifandraisana vaovao sns.
Azoko lazaina hoe tsara ny vokatry ny jery todika nandritra izay folo taona lasa izay. Mbola velona hatrany ny namana.serasera.org ary mbola malagasy ranoray hatrany hatramin'izao... mbola tsy mampidi-bola hatrany ihany koa :-) nefa mbola mahavita tena. Mbola misy ny namana vaovao miditra, na dia misy aza ny tsy hita intsony.
Dia samy ho tratry ny 10 taona manaraka indray :-)